Kupenya kwaKubrick, iyo bhaisikopo iyo Stephen King aisada | Zvazvino Zvinyorwa
Stanley Kubrick, director director < >.
Kubrick aive director wefirimu aionekwa seakajeka. Filmography ake anodzidziswa firimu zvikoro. Kuratidzika kwake kwemubhaisikopo, ziso remifananidzo, uye kubata kwakasarudzika kwechiratidzo kwakamuita mumwe wevatungamiriri vane mukurumbira wezana ramakore rechiXNUMX.
Akazvarwa muNew York muna Chikunguru 26, akafa makore makumi manomwe gare gare muLondon, Kurume 7. Akagadzira huwandu hwemapurojekiti gumi nematanhatu emafirimu, achiverenga pakati pemafirimu mapfupi, zvinyorwa uye mafirimu.
Mafirimu ake, chiratidzo chakakura chehupenyu
Zvikurukuru mafirimu ake ese anogona kutarisirwa ekare emufirimu. Asi pakati pevakakurumbira ndeaya: Lolita, zvichibva mubhuku raNabokov rine zita rimwe chete; Space Odyssey: 2001, iyo yakaburitswa gore pamberi pemwedzi wekutanga kumhara uye ndiyo yega firimu yakamukunda iye Oscar, kunyangwe paine hunyanzvi; uye A Clockwork Orange, yakaburitswa muna 1971.
Akanga achigara aine gakava director, kuti akazvibvumidza iye kushandisa cinema kuratidza nenzira yakanakisa maonero ake pamusoro penyika nezviitiko zvayo.
Musiyano uripo pakati paKubrick naMambo muThe Shining
Makore mashoma apfuura chikwangwani chakaitwa nezve maficha mafambiro e: Kupenya, Yakapfekwa naStanley Kubrick. Ichi chinyorwa chinotaura nezve director wit uye mashandisiro aanoita chiratidzo kupa simba kunyaya. Zvisinei, iyo poindi iyo inonyanya kukwezva kutariswa kwekurekodha uku kutaurwa kwekugara kurwa pakati pemutungamiriri nemunyori.
Sezvineiwo aya mashasha haana kuwana nzvimbo yepakati. Ichi ndicho chikonzero Mambo anogara achitaura nezve ino shanduko seimwe yeakaipisisa uye asinganzwisise chikonzero chekubudirira kwayo.
Jack Nickelson mu < >, firimu rinotungamirwa naStanley Kubrick.
Ichokwadi ndechekuti Kubrick akakwanisa kuverenga pakati pemitsara zvinokwezva zvaMambo, uye akazviratidza zvakananga mufirimu. Munguva yekurondedzerwa kwenyaya, Stefano akataura achidzokorora Rufu Rutsvuku.
Kubrick anoshandisa mafungu eropa anomhanyisa pasi maelevheti kuenda kuhotera yekuchengetedza simba Poe uye King's Red Death. Nenzira iyi Stephen King akafumurwa nezve ake maitiro uye pamwe ichi ndicho chikonzero nei director uye munyori vakaita kuti hupenyu husakwanise ivo panguva yekutora mifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » Kubrick's Kupenya